त’स्करहरद्वारा ह’त्या गरिएका असई गोविन्दकि श्रीमतिको यस्तो छ भनाइ, हामी दुःखीले कसरी बाँच्ने सरकार? (भिडियो हेर्नुस्) – Chautari Online
October 24, 2020 342
असइई गोबिन्दकि श्रीमतीको भनाइ यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा बाहरिएकाे छ । केराउ त’स्क’रले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ जुगेडास्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका ईञ्चार्ज गोविन्द विक र जवान राम बहादुर साउँदको ज्या*न लिएको खुलेको छ ।
प्र हरी समक्ष पक्रा*उ परेकाहरुले यस्तो ब यान दिएका हुन । प्रहरी अ’नुसन्धानका क्रममा शनिबार राति मोहना नदी बाट त*स्क’रले केराउ निकासी गर्न खोजेका थिए । गोविन्द बिक साधारण परिवारबाट सँघर्ष गरेर नै यहाँ सम्मकाे यात्रा तय गरिरहेका थिए ।
सोही क्रममा गस्तीमा निस्किएका असई गोविन्द विक र प्रहरी जवान राम बहादुर साउँद माथि ह म ला गरेको खुलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए । बिकले सो क्षेत्रमा हुने तस्क री नि य न्त्र णमा शुरु देखी नै क डाई गर्दै आएको बुझिएको छ ।
दुवैको ह त्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान बाट खुलेको छ । थप अनुसन्धानको लागी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र सीआईबीको टोली परिचालन भएको छ । असई विक श्रीमती र दुई छोरी सँगै कोठा भाडामा लिएर धनगढीमा बस्दै आएका थिए। हप्तामा एक पटक समय मिलाएर भेटघाटमा आउने उनी शनिबार धनगढी आउने योजनामा थिए।
तर धनगढी उपमहानगरपालिका १० मा पर्ने गौरी कटानको वनकट्टी घाटमा अ’वैध त’स्क*री भइरहेको छ भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरी जवान रामबहादुर साउदलाई मोटरसाइकलमा लिएर विक त्यहाँ पुगेका थिए। श्रीमतीलाई फोनमा कोठा आउँछु भनेका उनी त*स्क’रको प’न्जा बाट सकुशल फर्किन पाएनन्।
Prevआज शनिबार, शनिदेवलाई यसरी खुशी पार्नुहोस्, सबै रोकिएका काम बन्नेछ्न् !
Nextतीन युवती, तीन युवक, नाै हजारमा कुरा मिल्यो, तर पछि नाै युवक आएपछि….